किन जैविक कफी किन्न लायक छ? - iSearch
सुरु औषधि पसल खुशी किन जैविक कफी किन्न लायक छ?
अनगिन्ती जर्मनहरूले दिनभरि धेरै कप कफी पिउँछन्: यसको पिसाब यसको अनियमित स्वादको कारण गरम पेय सबैभन्दा लोकप्रिय पेय हो। तथापि, केहि मान्छे आफैलाई कफी बीनबाट आउँछ भनेर सोध्छन् - र कार्बनिक कफीको खरिदका साथ प्राय: ग्रहण गरिन्छ भन्दा बढी प्राप्त गर्न सकिन्छ।
उचित ओर्गेनिक कफी किन खरिद गर्नुपर्छ?
निष्पक्ष जैविक कफी किनेको कारण फरक र धेरै दुवै हो। यो कफीको लागि प्राय सबै खरिदहरूमा के कुरा हुन सक्छ, उत्पादन वा खेतीको पृष्ठभूमि हो: कार्बनिक कफीको खेतीमा सबै भन्दा राम्रो सम्भावित व्यापार र कामदारहरुको लागि राम्रो काम गर्ने अवस्थाहरुमा भुक्तानी गरिन्छ। त्यसोभए उत्पादन नैतिक रूपमा स्थायी रूपमा सम्भव हुनुपर्छ र पारंपरिक कफीको तुलनामा उचित र अधिक सामाजिक रूपमा डिजाइन गरिएको हुनुपर्छ।
पनि कुनै ध्यान मात्र बिक्री र व्यापार मा एक वातावरण मैत्री, दिगो रोपण भुक्तान छ, तर पहिले नै कफी सिमी को खेती मा। तसर्थ, सिमी कम प्रदूषण द्वारा, जो मात्र स्वस्थ कफी बनाउँछ, तर पनि स्वाद सुधार प्रभावित छन्। जैविक कफी अर्थात् जहाँ माटो गर्न पोषक समय बिना पुनर्जनन र सबैभन्दा लाभ लागि हटाउन तथाकथित monoculture, मा विशुद्ध आर्थिक हुर्किसकेका छैन ल्याउन - जैविक कफी को खेती ज्यादातर तथाकथित मिश्रित वृक्षारोपण, जहाँ डे कफी सिमी, उदाहरणका लागि, बाहेक गर्ने गरेको छ Avocado या केला पौधे लगाए। धेरै कम उर्वरक र धेरै कम गहन दुश्मन नियन्त्रण आवश्यक पर्दछ। ठूला मिसिनहरूको सट्टा कटनीमा, कामदारहरूलाई सेम फसल काटेर कामदारहरू रोजगारीमा छन्।
सामान्य कफीमा स्वाद र मूल्य फरक
साधारण कफी र कार्बनिक कफी बीच धेरै भिन्नताहरू छन् - सबै भन्दा ठुलो स्वाद स्वाद र मूल्य हुन्। किनभने तिनीहरूले झूटो अक्सर संयोजन मा देखावटी मूल्यहरु संग जैविक उत्पादनहरु ल्याउन विशेष गरी मूल्य निर्धारण विचार धेरै संभावित खरीदारों देखि नहट्न। यहाँ, लागत फिल्टर कफी organically हुर्किसकेका थियो छैन र एकदम प्रति किलोग्राम बारेमा 15 EUR कारोबार कफी ब्रान्डहरु ज्ञात। कार्बनिक कफी हरेक किलोग्रामको बारेमा 18 EUR सम्म पुग्छ। त्यसैले मूल्य फरक अक्सर कल्पित छ ताकि विशाल छैन - तर व्यक्तिगत मूल्यहरू को पाठ्यक्रम ब्रान्ड, मात्रा निर्भर छन् र किनभने जैविक कफी बढ्दै र बिक्री मा मात्र होइन नैतिक लाभ द्वारा प्रभावशाली छ, एक तुलना सार्थक छ टाइप, तर पनि स्वाद। कम उत्सर्जनको खेतीको लागि धन्यबाद, स्थाई खेतीबाट कफी सेम प्रायः धेरै बढ्दो र स्वादको भरपर्दो हुन्छ।
तपाईं जैविक कफीलाई कसरी चिन्न सक्नुहुन्छ?
कार्बन कफी अब पारदर्शी उत्पादनमा धेरै डिस्काउटरहरूमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसो गर्दा तपाई कार्बनिक लेबल द्वारा निर्देशित गर्न सकिन्छ: कफी, उदाहरणका लागि, जो युरोपेली कार्बनिक सीलसँग लेबल गरिएको छ, GMO को बिना र रासायनिक कीटनाशकहरूको प्रयोग बिना नै बढेको छ। हेक्सागोनल कार्बनिक सील बीमा गरिएको छ कि कम से कम कफीको 95% ईसी कार्बनिक विनियममा निहित छ र कार्बनिक खेती बाट आउँछ। यदि कफी निष्पक्ष व्यापार सीलसँग चिन्ह लगाइयो भने, यो ग्यारेन्टी गरिएको छ कि कफी किसानहरूले उचित र उचित वेतन प्राप्त गर्दछन्।
कार्बनिक कफी सार्थक छ - न केवल निष्पक्ष, कार्बनिक खेती, तर शुद्ध स्वाद मार्फत। पारंपरिक कफीको तुलनामा, मूल्य-प्रदर्शन अनुपात महत्त्वपूर्ण छ - वातावरणको संरक्षण र श्रमिक र किसानहरूको लागि राम्रो काम गर्ने अवस्थाहरू समर्थन गर्ने, एक खरीदारको रूपमा, तपाईं प्रदूषक बिना उच्च गुणस्तरको कफी पनि आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
अघिल्लो लेखसांगो समुद्री कोरल
अर्को लेखअलसी तेल